Bit By Bit - दौड प्रयोगहरू - 4.5.1.3 आफ्नो आफ्नै उत्पादन निर्माण
तपाईंको आफ्नै उत्पादन निर्माण उच्च जोखिम, उच्च-इनाम छ। तर, यो काम गर्दछ भने, तपाईं विशिष्ट अनुसन्धान सक्षम बनाउँछ सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश लाभ उठाउन सक्छन्।
एक कदम अगाडी, केही अनुसन्धानकर्ताहरूले वास्तवमा आफ्नै उत्पादनहरु निर्माण तपाईँको आफ्नै प्रयोग निर्माणको दृष्टिकोण लिएर। यी उत्पादनहरू सहभागीहरू आकर्षित, र त्यसपछि प्रयोगहरू र अनुसन्धान अन्य प्रकारका लागि मन्च रूपमा सेवा गर्छन्। उदाहरणका लागि, मिनेसोटा विश्वविद्यालय मा शोधकर्ताओं को एक समूह सिर्जना MovieLens मुक्त, गैर-व्यावसायिक व्यक्तिगत चलचित्र सिफारिसहरू प्रदान गर्दछ जो। MovieLens 1997 देखि लगातार संचालित छ, र यो समयमा 2,50,000 दर्ता प्रयोगकर्ता 30,000 भन्दा बढी चलचित्र लगभग 20 लाख भन्दा बढी मूल्यांकन प्रदान (Harper and Konstan 2015) । MovieLens सार्वजनिक सामान योगदान बारे सामाजिक विज्ञान सिद्धान्त परीक्षण देखि लिएर सुन्दर अनुसन्धान सञ्चालन गर्न प्रयोगकर्ताहरूको सक्रिय समुदाय प्रयोग गर्नुभएको छ (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) सम्बोधन गर्न सिफारिस प्रणाली मा एल्गोरिथमिक चुनौतीहरू (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; पूर्ण समीक्षा लागि हेर्न Harper and Konstan (2015) । यी प्रयोगहरूले थुप्रै सम्भव वास्तविक काम उत्पादन पूर्ण नियन्त्रण भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बिना भएको थियो।
दुर्भाग्यवश, तपाईँको आफ्नै उत्पादन निर्माण अविश्वसनीय गाह्रो छ, र तपाईं सुरु-अप कम्पनी सिर्जना जस्तै यो विचार गर्नुपर्छ: उच्च जोखिम, उच्च-इनाम। यसलाई सफल छ भने, यो दृष्टिकोण विद्यमान प्रणाली मा काम बाट आउन कि यथार्थवाद र सहभागीहरू संग आफ्नो प्रयोग निर्माण आउँछ भनेर नियन्त्रण धेरै प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, यस दृष्टिकोण संभावित जहाँ थप अनुसन्धान राम्रो उत्पादन थप अनुसन्धानकर्ताहरूले र यति मा (चित्रा 4.15) तिर जान्छ थप प्रयोगकर्ताहरूलाई जान्छ जो जान्छ सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश सिर्जना गर्न सक्षम छ। अर्को शब्दमा, एक पटक सकारात्मक प्रतिक्रिया लुपमा पछीको, अनुसन्धान सजिलो र सजिलो प्राप्त गर्नुपर्छ। यो दृष्टिकोण गर्न सम्भावित उल्टो भए तापनि यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न बस कसरी गाह्रो छ देखाउँदछ सफलता, कुनै पनि अन्य उदाहरण पाउन सक्दैन। तर, मेरो आशा यो रणनीति थप व्यावहारिक प्रविधि सुधार रूपमा हुनेछ भन्ने छ। तपाईंको आफ्नै उत्पादन सिर्जना यी कठिनाइ अनुसन्धानकर्ताहरूले एक उत्पादन नियन्त्रण गर्न चाहने एक कम्पनी, म अर्को सम्बोधन छौँ विषय धेरै बढी सम्भावना साझेदार हो कि अर्थ।
आंकडा 4.15: तपाईं सफलतापूर्वक आफ्नो आफ्नै उत्पादन निर्माण गर्न सक्छन् भने, तपाईं सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश लाभ उठाउन सक्छौं: अनुसन्धान राम्रो उत्पादन थप प्रयोगकर्ताहरूलाई जान्छ जो जो पनि अधिक अनुसन्धान गर्न जान्छ जान्छ। सकारात्मक प्रतिक्रिया लूपहरूको यी प्रकार सिर्जना गर्न अविश्वसनीय कठिन छन्, तर तिनीहरू अन्यथा सम्भव छैन भनेर अनुसन्धान सक्षम पार्न सक्नुहुन्छ। MovieLens सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश सिर्जना गर्न सफल छ कि एक अनुसन्धान परियोजनाको एउटा उदाहरण हो (Harper and Konstan 2015) ।